Barca Oo Heshiis La Gaadhay Xiddig Man City Ah, Ciyaartoy Mustaqbal leh Oo Ka Tegay Arsenal, Man United Oo Laacib Luminaysa, Liverpool Oo Yaabban Iyo Wararkii U Dambeeyey | Laacibnet.net
Barca Oo Heshiis La Gaadhay Xiddig Man City Ah, Ciyaartoy Mustaqbal leh Oo Ka Tegay Arsenal, Man United Oo Laacib Luminaysa, Liverpool Oo Yaabban Iyo Wararkii U Dambeeyey
Si kastaba, sidii aan nooga barateen waxa aanu halkan idinkula wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanta ahaa iyo hadal haynta suuqa ka jirta ee ay qoreen wargeysyada ugu waaweyn Yurub maanta oo Khamiis ah.
Wakiilladda xiddiga Manchester United ee Jesse Lingard oo 28 jir ah, ayaa waxay wada-hadallo hordhac ah la leeyihiin kooxda reer France ee Nice si uu ugu wareego qaab amaah ah inta ka hadhay xilli ciyaareedka, balse heshiiska loo beddelo mid rasmi ah xagaaga soo socda. (Sky Sports)
Tababaraha Wolves ee Nuno Espirito Santo ayuu wakiilkiisu u raadinayaa koox cusub oo Premier League ah xataa iyadoo uu tababarahan reer Portugal bishii September saxeexay heshiis cusub oo uu kusii joogayo Molineux Stadium. (Sun)
Tottenham Hotspur waxay kansalaysaa qandaraaskii ay kula jirtay Danny Rose bishan Januaary, waxaana 30 jirkan difaaca bidix ah xiisaynaysa kooxda West Brom. (Talksport)
Mesut Ozil oo 32 jir ah ayaa u sheegay Arsenal in haddii ay siiyaan £7 miliyan oo Gini oo lacag ah ka hor inta aan la gaadhin xagaaga soo aaddan, inuu bishan January ka tegi doono kooxdaas. (The Athletic)
Arsenal waxa ka tegay 19 jirka weerarka reer England ee Folarin Balogun oo ku biiraya kooxda reer Germany ee RB Leipzig. (Football Insider)
Liverpool waxay qorshaynaysaa inay lasoo saxeexato difaaca Brighton ee Ben White oo 23 jir ah. (Liverpool Echo)
Difaaca Manchester City iyo xulka Spain ee Eric Garcia oo 20 jir ah ayaa heshiis shaqsi ah la gaadhay Barcelona, iyadoo uu si bilaash ah ugu wareegi doono xagaaga. (Goal)
Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ku kalsoon in kooxdiisa Barcelona ay lasoo saxeexan doonto laba ciyaartoy oo reer Netherlands ah. Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Liverpool ee Georginio Wijnaldum oo 30 jir ah iyo weeraryahanka Lyon ee Memphis Depay oo 26 jir ah ayuu ku sugayaa Camp Nou. (Mundo Deportivo)
Tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho wuxuu ku adkaystay in kubbad-sameeye Harry Winks oo 24 jir ah aanay kooxdiisu ku bixin doonin amaah bishan January. (Football London)
Difaaca Everton ee Jonjoe Kenny waxa laga yaabaa inuu bishan ka tago Toffees, waxaana 23 jirkan raadinaysa Burnley. (Liverpool Echo)
AC Milan waxay wada-hadallo la yeelatay wakiilka weeraryahankii hore ee Juventus ee Mario Mandzukic oo 34 jir ah, si uu laacibkan reer Croatia si bilaash ah ugu biiro. (Football Italia.
Celtic iyo Rangers ayaa labaduba doonaya weeraryahanka reer Nigeria ee Taiwo Awoniyi oo ah 23 jir ka tirsan Lioverpool, laakiin hadda amaah ugu maqan kooxda Union Berlin ee waddanka Germany. (90min)
Jack Wilshere oo 29 jir ah, isla markaana koox la’aan ahaa tan iyo xagaagii ayaa waxa doonaysa Bournemouth oo tababaheeda Jason Tindall uu qorshaynayo inuu u bandhigo heshiis waqti gaaban ah. (Mail)
Xiddigaha Ugu Waa Weyn Barcelona Oo Qarka U Saaran In La Xaraasho Iyo Walwal Cusub Oo Soo Foodsaaray Barca